Diabetes Mellitus – Healthy Life Journal
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေက ဘယ်လိုအသီးတွေကို စားလို့ရပါသလဲ၊ ဘယ်လိုအသီးတွေကို ရှောင်သင့်ပါသလဲ။ A. ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေမှာ အသီးတွေက တော်တော်များများ စားလို့ရပါတယ်။ ဘာနဲ့ကြည့်သလဲဆိုရင် GI (Glycemic Index)နဲ့GL(Glycemic Load)ဆိုပြီး...
ဆီးချိုရောဂါ စစ်ဆေးရာမှာ . . .
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုရောဂါသမားတွေက မနက်တိုင်း သွေးတွင်းသကြားဓာတ် တိုင်းတာဖို့ လိုပါသလား ဆရာ။ A. ဆီးချိုသမားတွေဟာ မနက်တိုင်း သွေးတွင်းသကြားဓာတ် တိုင်းတာဖို့ လိုသလားဆိုတော့ တိုင်းနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။...
ဆီးချိုရှိသူက ဘယ်လိုအားဆေး သောက်သင့်ပါသလဲ
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကျွန်မ ဆီးချိုရောဂါရှိပါတယ်။ အားဆေးသောက်ချင်လို့ပါ။ ဘယ်လိုအားဆေးကို ရွေးချယ်သောက်သင့်ပါသလဲ။ Daw lay(FB) A. အားဆေးဆိုတဲ့နေရာမှာ မာလ်တီဗီတာမင်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မာလ်တီဗီတာမင်ရဲ့ သဘောက ချို့တဲ့တဲ့သူတွေအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ ဒါတွေက...
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– ဆီးချိုလူနာ အတော်များများ လာမေးတာက ကစွန်းဥစားလို့ရလား၊ အာလူးစားလို့ရလားဆိုပြီး မေးတတ်ပါတယ်။ စားလို့ရပါတယ်။ ကစွန်းဥရဲ့သဘာဝက ဗိုက်ပြည့်လွယ်ပါတယ်။ တချို့နေ့တွေမှာ ကစွန်းဥတစ်လုံးလောက် စားထားတယ်ဆိုရင် စွတ်ပြုတ်တစ်ခွက်လောက် သောက်ပေးရုံနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အာလူးမှာလည်း...